सोध्ने गणकलाई उल्टै प्रश्नको दनक ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
मंसिर ५, २०७८ आइतबार १३:४०:४५ | मिलन तिमिल्सिना
कति वर्ष कति वर्ष, कसले उमेर गनेर बस्यो र नानी ? अहिलेजस्तो वर्षैपिच्छे 'हेप्पी बर्थ डे' भनेर बेलुन फुक्दैन थिए उबेला । अलिअलि खुट्टा लाग्न थालेपछि अहिलेका बुढा माग्न आए, अहिले पो बुढा उतिबेला त सानै थिए कट्टु पनि लगाउन र सिँगान पुछ्न पनि नजान्ने । आफूलाई पो के आउँथ्यो र बा । ऊ पनि उस्तै, आफू पनि उस्तै । माग्न आए, बाआमाले पठाइदिए । कताको लभ, कताको माया, बिहे भनेको के हो, बिहे गरेर के हुन्छ भन्ने थाहा नपाइकन बिहे भयो ।
किन जान्नुपर्‍याे । जानेर के हुन्छ ? लेख्न,पढ्न जान्नेले के गरे ल भन त नानी ? उबेला चुनावमा यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर बजियाहरूले त्यत्रो घोषणापत्र लेखेका होइनन् ? अनि घोक्रो फुलाइ फुलाइ तिनै बज्जेहरूले त्यही घोषणापत्र पढेर सुनाएका होइनन् ? तिनीहरूले लेखेजस्तो भयो ? पढेजस्तो भयो ? हामीलाई भनेजस्तो भयो ? हामीलाई सुख भयो ? देशमा समृद्धि भयो ? तिनीहरूले झगडा गर्न छोडे ? महँगी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, लडाइँ, झगडा, मारकाट सधैँका लागि अन्त्य भयो ? ल भन के चाहिँ भयो ? के गर्छु भनेका थिए के भयो ?
Ajay Anjaan Lama
Nov. 23, 2021, 8:09 a.m.
जनगणनामा सम्पति,पशु चौपायाको पनि विवरण सोध्ने भए कृषि गणना र सम्पत्ति विवरण किन भर्ने र गर्ने गर्नुपर्यो र एकैचोटी जनगणना मै मिल्ने भए । नबुझेको कुरा सरकार !